Mandalay မှ Mobile House ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ ၁ နှစ်ပြည့် အထူးအစီအစဉ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Classifieds, Personal Ad. » Mandalay မှ Mobile House ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ ၁ နှစ်ပြည့် အထူးအစီအစဉ်
Mandalay မှ Mobile House ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ ၁ နှစ်ပြည့် အထူးအစီအစဉ်
Posted by Mobile House on Aug 3, 2011 in Classifieds, Personal Ad. | 8 comments
မှ ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ ၁ နှစ်ပြည့် နှင် မိုးရာသီအထူးအစီအစဉ် အနေဖြင့် Customer များကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် . . .
၁.၈.၂၀၁၁ မှ ၁.၁၁.၂၀၁၁ အထိ . . .
-SERVICE ၁၀% လျှော့ပေးခြင်း
Phone – 092019033 , 0991022443
Email – Mobilehouse.mdy@gmail.com
ယူအက်စ်က ဖုန်းတွေ… မြန်မာပြည်ကိုမှောင်ခိုချလို့ မရဘူးလား..။
၀ယ်ချင်တဲ့ ဖုံးကို… ဈေးတွေရှိရင်တင်ပေးပါလား..။ ကိုက်ရင်ပို့ပေးမယ်လေ…။
အခုတလော.. လာသမျှ ဆယ်ရီဘရိတ်တီတွေ.. အိုင်ပက်..။အိုင်ဖုံးဝယ်လွန်းလို့.. ဈေးတွေတောက်ကြည့်တာ..
ဂျီဂျီးတို့ စီးပွားရေး သောင်းကြမ်းနေပါပကောလား..
အကြွေး.ကော…မှာလို့ ရလား ခင်ည….
သူကြီးတို့ ကတော့လုပ်ချလိုက်ပါပီ။ဆယ်ရီဘရိတ်တီ တွေမှာက ဘဲဘဲ တို့ ဦးဦးတို့ ကဝယ်ပေးတာလဲရှိမှာပေါ့။ဝယ်သာဝယ်တာပါ မြန်မာပြည်မှာ iDevice သုံးရတာမတန်လောက်ပါဘူး။အထူးသဖြင့် webpage တွေ ပျောက်လွန်းလို့ ။သုံးကိုမရတာပါ။ရတဲ့ YouTube လေးကလဲ burn ထားသေးတယ် ဟွန့် 
http://www.polysolve.com က နေ ကျော်ဝင် လိုက်ပါ ။အဆင်ပြေပါ တယ် ။ I Device ကတော့ wifi ရှိမှ အဆင်ပြေ မှာ ။game ဆော့လို့ ကောင်း ပါ တယ်။သူနဲ့ပတ်သက် သာတွေ က တော့ ၀ယ် ရတာ ဈေးကြီးတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရင်က နေပြည်တော်ဆိုလို့ နေပြည်တော်ဖုန်းဝယ်ကိုင်ခဲ့သေးတယ်။450 မှာ အစုံသုံးလို့ မရတော့ handset ကောင်းကောင်းကိုင်မရဘူးလေ။ခုတော့ 800MHz ဆိုတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ကမ်းရိုးတန်းဒေသပေမယ့် handset လဲသုံးနေရတဲ့ roaming စနစ်ကိုမကြိုက်ပါဘူးအရင်ကရှိခဲ့တဲ့ AnyData ASP 515A window 6.1 touch screenဖုန်း ခုရောလာသေးလားမေးကြည့်တာ။နောက်450 အတွက် android ရော smart ဖုန်းမထွက်နိုင်ဘူးလား။
၄၅၀ အတွက် မထွက် နိုင်သေးဘူး ။ခုတောင် battery စားနေတာ ။touch ဆို ပိုဆိုး တာပေါ့ ။နောက်တော့ လာ မှာ ပါ ။တောင်းဆိုသူ များ တယ် လေ။ anydata က မ ၀င် တော့ ဘူး ။တရုတ် ပြည် မ မှာ ရှာ ရင် တော့ ရ နိုင် မယ် ထင် တယ် ။
နောက်တော့ 450 အတွက်ဝင်လာဦးမှာပေါ့နော်။အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခုလိုဖြေပေးတာကိုနော်။black prince ရေ ကျေးဇူးအထူးပါနော်။နောက်သိချင်တာလေးတွေရှိရင်မေးပါမယ်